कुल्लीदेखि बस कन्डक्टरको काम गरेका रजनीकान्त कसरी बने सुपरस्टार ? – bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > कुल्लीदेखि बस कन्डक्टरको काम गरेका रजनीकान्त कसरी बने सुपरस्टार ?
२७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । बलिउड र टलिउडका सुपरस्टार रजनीकान्त ७० औँ जन्मदिन मनाइरहेका छन् । सन् १९५० को डिसेम्बर १२ तारिखका दिन बेंगलुरुको मराठी परिवारमा जन्मिएका थिए । गरिब परिवारमा जन्मिएका रजनीकान्तले जीवनमा कडा मेहेनत र संघर्ष गरेका छन् । टलिउडमा मात्र होइन बलिउडमा पनि रजनीकान्तले चर्चा कमाएका छन् । साउथ भारतमा रजनीकान्तलाई भगवान र थलाइवा भनेर पूजा गरिन्छ । फिल्ममा दमदार अभिनय गर्ने रजनीकान्त वास्तविक जीवनमा पनि निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन् ।
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी २७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु २७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? २७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। २७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७
महामारीको असर कहिले कम र कहिले धेरै छ, रोमथामका प्रयास निरन्तर चाहिन्छ : उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठ २७ मंसिर २०७७, शनिबार २०:३७